नायिका सारा सिरपाइलीको नजरमा निखिल एक्सन होइन ‘रोमान्टिक स्टार’ (भिडियो) – Medianp
नायिका सारा सिरपाइलीको नजरमा निखिल एक्सन होइन ‘रोमान्टिक स्टार’ (भिडियो)
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, पुष २७, २०७४१६:५२
काठमाडौँ , २७ पुस। एक्सन स्टार निखिल उप्रेतीको चलचित्र ‘रुद्र’बाट डेब्यु गरेकी नायिका सारा सिरपाइलीले आफ्नो दोस्रो चलचित्र ‘पिँजडा ब्याक अगेन’मा पनि निखिलसँगै अनस्क्रिन शेयर गरेकी छन् । निखिल र सारा अहिले सोही चलचित्रको प्रमोसनमा व्यस्त रहेका छन् ।
आउँदो माघ ४ गते प्रदर्शनमा आउन लागेको निखिल र सारा अभिनित् ‘पिँजडा ब्याक अगेन’ चलचित्रमा जोसपूर्ण युवाको अल्छिपनलाई उतारिएको छ । मिडिया एनपीसँगको कुराकानीमा निखिल र साराले पिँजडा ब्याक अगेनमा आफ्नो भूमिकाबारे प्रष्ट्याएका छन् ।
‘एउटा युवा जोस जाँगर भएको, तर आवारा केटाको भूमिकामा छु’, निखिल भन्छन् । तर निखिलको भन्दा विपरित भूमिका सारा रहेकी छन् । अल्छि भूमिकामा निखिल देखिए पनि सारा भने निडर महिलाको रुपमा रहेकी छन् । ‘एउटा बलियो केटी, आमा, न्याको लागि सधैँ अगाडि सर्ने निडर महिलाको भूमिकामा छु’, नायिका साराले बताइन् ।
पिँजडा ब्याक अगेनमा खेल्न पाउँदा आफूलाई निकै खुशी लागेको बताउने साराले निखिलसँग अनस्क्रिन शेयर गर्दा धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएको जानकारी दिइन् । ‘निखिलसँग स्क्रिन शयेर गर्न पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ’, उनी भन्छिन्, ‘म नयाँ नायिका भएकै कारण पनि उहाँले धेरै कुरा सिकाउनु भयो, जसलाई मैले अवसरको रुपमा लिएकी छु ।’
एक्सन उपाधि पाउनकै लागि आफूले कुनै पनि चलचित्र नगरेको बताउने निखिलले दर्शकको इच्छा र चाहनालाई केन्द्रमा राख्ने गरेको दावी गरे । ‘एक्सन स्टार, एक्सन किङ, यो सब नाम पाउनको लागि मैले एक्सन मुभी गरेको होइन’, उनी भन्छन्, ‘म मार्शल आर्टिस्ट हूँ, त्यसको अलवामा धेरै कुराहरु (विभिन्न भूमिकामा) गर्छु, त्यो केवल दर्शकहरुको इच्छा र चाहनाअनुसार ।’
चलचित्रमा एक्सन भूमिकामा देखिने निखिलको वास्तविक स्वभावबारे धेरैलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ । यही जिज्ञासा मिडिया एनपीले पनि राख्दा उनले निकै शान्त र अरुको भलो चिताउने मान्छेको रुपमा आफू रहेको दावी गरे ।
‘वास्तविक जीवनमा म एकदम नरम र शान्त स्वभावको मान्छे हूँ, अरुलाई दुःख दिने, अरुको नराम्रो होस् भन्ने मेरो सोच छैन’, निखिल बताउँछन् ।
तर, दुईवटा चलचित्रमा स्क्रिन शेयर गरेकी नायिका साराको आँखामा भने निखिल कस्ता छन् ? मिडिया एनपीले उनीसँग पनि जिज्ञासा राख्यो । सारा भन्छिन्, ‘निखिल जीको कुरा गर्नु पर्दा उहाँलाई रोमान्टिक स्टार भन्न मन पराउँछु ।’
पिँजडा’ चलचित्रबाट डेब्यु गरेका निखिलले पिँजडा ब्याक अगेन ‘पिँजडा’को सिक्वेल चलचित्र नभएको बताए ।
हिमाल केसीले निर्देशन गरेको ‘पिँजडा ब्याक अगेन’मा निखिल, सारासहित सुष्मिता केसी, पुकार भट्टराई, ज्याक श्रेष्ठलगायत कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । ‘पिँजडा ब्याक अगेन’लाई रोहित पुरी, गोबिन्द गैरे र चन्द्रबहादुर क्षेत्रीले निर्माण गरेका हुन् ।
यसैबीच, निखिलले ‘कमिटमेन्ट ६० आवर्स’लाई निर्देशन गरिरहेका छन् । बलिउड नायक नायिका सहभागी गराइएको सो चलचित्रको हाल नेपाल, भारतलगायत मुलुकमा सुटिङ भइरहेको छ ।
२०१८ मा पहिलो पटक स्क्रिनमा रोमान्स गर्दैछन् बलिउडका यी १५ जोडी
सबैलाई भावुक बनाउने भिडियो , जहाँ कुकुरका ५ वटा छाउरालाई गाईले दुध खुवाएपछि !
यूकेमा नम्रताको साथमा देखिए धिरज र जसिता ! आखिर हरेक कार्यक्रममा किन छुट्दैन यो जोडी ?